[Okubalulekileyo] Izaziso kunye nezicelo kubatyeleli (ezinxulumene neCoronavirus Infectious Diseases) | Umbutho Wokukhuthaza Inkcubeko kwiWadi
[Kubalulekile] Izaziso kunye nezicelo kuzo zonke iindwendwe (ezinxulumene nosulelo olutsha lwe-coronavirus)
202003 / 01(Ngo)
UmbuthoIndawo yabemiIaplicoIhlathi lenkcubeko
Kwizibonelelo ezilawulwa ziqhutywa nguMbutho Wokukhuthaza Inkcubeko kwiWadi yeOta (Ota Ward Plaza, Ota Ward Hall Aplico, Ota Bunkanomori), iSebe lezeMpilo, elezabasebenzi kunye neNtlalontle kunye ne-Ota Ward lisasaza ulwazi malunga nosulelo olutsha lwe-coronavirus Ngelixa bezama ukuqokelela ulwazi lwamva nje, sinikela ingqalelo kuthintelo losulelo kunye nokusasaza uthintelo, kwaye sithathe amanyathelo alandelayo.
Sifuna ukuqonda kwakho kunye nentsebenziswano ukuze ukhusele impilo yazo zonke iindwendwe kunye nokuthintela ukusasazeka kosulelo.
Imizamo yokuthintela ukosuleleka
Ukuhlikihla utywala kufakwe kwiindawo ezahlukeneyo zesakhiwo, kwaye kufakwe isepha yolwelo kwigumbi lokuhlambela ngalinye.Nceda usebenzise ngokufanelekileyo.
Ngaphakathi kwesi sakhiwo, siqhuba ngokubulala iintsholongwane amaxesha ngamaxesha yonke imihla ngokusebenzisa iikhemikhali ezixutywe.
Abasebenzi abadibana nabathengi, siya kunxiba iimaski ukukhokela nokuphendula.
Ipowusta yokukhanyisela malunga nokuhlamba izandla kunye ne-etiquette yokukhwehlela ithunyelwe eholweni.
Ukuba unempawu ezinje ngengqele, nceda uyeke ukutyelela imyuziyam.
Nceda usebenzisane ngokunxiba imaski kwiholo kangangoko.
Ukuba ukhohlela okanye uthimla, nceda usebenzisane "ne-etiquette yokukhwehlela" egubungela umlomo wakho ngesigqubuthelo, itshefu, izicwili, ngaphakathi kwebhatyi nemikhono.
Indlela echanekileyo yokuhlamba izandla
Malunga nendlela yokukhohlela
Malunga nokubamba imiboniso, njl.
Eminye yemidlalo ebibanjelwe nguMbutho iye yarhoxiswa okanye yamiswa.Kuxhomekeke kwimpendulo kunye nemiyalelo yelizwe kunye ne-Ota Ward, imidlalo enokuthi irhoxiswe okanye imiselwe elinye ixesha inokwenzeka kwixesha elizayo.Siza kukugcina uhlaziywa kwimeko yakutshanje kwiwebhusayithi yethu nakwiakhawunti esemthethweni ye-Twitter, ke nceda ujonge ukuba uceba ukusindwendwela.
Imisebenzi neenkomfa ezibanjelwe kwiziko ngalinye ziboniswa kangangoko kunokwenzeka kwiphepha lasekhaya lombutho "XNUMX Ikhalenda Yomsitho Wokwakha", kodwa nceda ujonge kumququzeleli ngamnye ngolwazi olutshanje.